Ya Thar Shi-ရသာရှိ ကြက်သံပုံးကင်
ရသာရှိ-ကြက်သံပုံးကင် စားဖို့ 😋😋😋 ဒီကို ဖုန်းဆက် ... 📞 09 440 820 490 *** ရသာရှိ-ကြက်သံပုံးကင် *** ၁ ကောင် ၁၂,၀၀၀ ကျပ် ☝🏻ကမ္ဘာ့ နာမည်ကြီးဆုံး ✌🏻London မှာ လူကြိုက် အများဆုံး 🤗 👏🏻Nando's PERi-PERi Sauces ၂ မျိုးနဲ့ ***ရသာရှိ Nando’s ကြက်သံပုံးကင် *** ၁ ကောင် ၁၅,၀၀၀ ကျပ် ဗမာကြက် ... 👉🏻 သံပုံးနဲ့ ကင်တဲ့ အခါ ပြင်ပဆီ သုံးစွဲ ပါ၀င်ခြင်း မရှိပါ 👉🏻 ကြက်ထဲရှိ ဆီ အားလုံးလည်း သံပုံး နဲ့ ကင်ရင်း ကုန်သွားတာမို့လို့ 👉🏻 ကျန်းမာရေး အတွက် 👉🏻 ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ထိန်းသူများ အတွက် 👉🏻 ၁ ကောင် မှာ Protein ၁၅၀ ဂရမ် ပါ *** ရသာရှိ-CP ကြက်သံပုံးကင် *** ၁ ကောင် ၁၁,၀၀၀ ကျပ် ***ရသာရှိ Cp-Nando’s ကြက်သံပုံးကင် *** ၁ ကောင် ၁၄,၀၀၀ ကျပ် Pre Order (၁) ရက်ကြိုတင် အော်ဒါတင်ရပါမယ် 🤗 နေ့လည့် ~ ညနေ ( ၂ ကြိမ် ) Delivery ကားလေး 🚚 နဲ့ ပို့ပေးမှာပါ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nando’s PERI-PERI Sauce - Hot 🥵 - Medium - Garlic 🧄 Medium - Mild - Lemon 🍋 & Herb 🌿 ( Extra Mild ) - Garlic 🧄 Mayonnaise Medium - Garlic 🧄 Mayonnaise Hot 🥵 ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ( ၂ ) မျိုးရွေးပေးနော် 🤗 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nando's PERi-PERi Sauces သီးသန့်ဝယ်ယူလိုသော PERi-PERi Sauces ကြိုက်သူများအတွက် *** ပုလင်းကြီး 500g - 25,000 ကျပ် *** ပုလင်းသေး 250g - 13,000 ကျပ် ***Mayonnaise 465g - 17,000 ကျပ် ***Mayonnaise 265g - 13,000 ကျပ် ***xx Hot 🥵125g - 13,000 ကျပ် ***VUSA 🥵 125g - 17,000 ကျပ် နဲ့ ဝယ်ယူလို့ပါရပါပီ 😋 အိစက်နေတဲ့ သရက်သီး 🥭 အသား နွားထိုးကြီးမြို့ တမြို့ထဲ မှာ ထွက်တဲ့ တောင်ခြေ သရက်သီး နဲ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒေါ်ပု တောင်ခြေ သရက်သီး ဆီစိမ် 😋၃၅၀၀ ကျပ် ရသာရွိ-ၾကက္သံပုံးကင္ စားဖို႔ 😋😋😋 ဒီကို ဖုန္းဆက္ ... 📞 09 440 820 490 *** ရသာရွိ-ၾကက္သံပုံးကင္ *** ၁ ေကာင
At Lemon Tart we offer products at amazingly low prices and new designs everyday.
San Diego Chrysler Dodge Jeep Ram | CDJR Dealer Serving Lemon Grove
WOW Skin Science Brightening Vitamin C Foaming Face Wash is an advanced skin-brightening and anti-aging cleanser. It comes enriched with mulberry and liquorice extracts, vitamin C and lemon and orange essential oils. #NatureInspiredBeauty #WOWSome
Sweet Lemon – Sweet-Lemon
SIRPLUS | British menswear born from surplus fabrics
TODOS NUESTROS SETS CON 10% DE DESCUENTO ‼️‼️ No dejes pasar esta promo por primavera y elige tu color favorito: -Mora tie dye -Lemon tie dye -Milky tie dye ¡EL ENVÍO ES TOTALMENTE GRATIS!
Genuine Tea | Online Tea Shop | Third Wave Tea | Direct Trade